NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်, အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် PrimeTime Lighting MSLED အသံလွှင့်စတူဒီယိုနဲ့ LED အလင်းစီးရီးအနိမျ့-ကိုယ်ရေးဖော်ပြ
Home » သတင်း » PrimeTime Lighting MSLED အနိမျ့-ကိုယ်ရေးဖိုင်အသံလွှင့်စတူဒီယိုနဲ့ LED အလင်းစီးရီးဖော်ပြ
PrimeTime Lighting MSLED အနိမျ့-ကိုယ်ရေးဖိုင်အသံလွှင့်စတူဒီယိုနဲ့ LED အလင်းစီးရီးဖော်ပြ
Dallas - တက္ကဆက်ပြည်နယ်အခြေစိုက် PrimeTime Lighting နိမ့်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုစီးရီးထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုအလင်းအိမ် LED ပြသလိုက်ပါတယ်။ PrimeTime ၏သမာဓိမှစစ်မှန်သောဤ MSLEDs ရေရှည်မိုးသည်းထန်စွာစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းမှထရပ်တယ်။ အဆိုပါ MSLEDs တစ် 93 + CRI အတူဘာသာရပ်န်းကျင်ထုပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအပျော့-အရိပ်အလင်းပါရှိပါတယ်။
PrimeTime အလင်းအိမ်အဆိုပါထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုအလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှမတူထူးခြားတာ LED:
passive, NO FAN အအေး!
မဆိုထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုအတွက် fit - နိမ့်မျက်နှာကျက်နှင့်အတူပင်စတူဒီယို
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Featured အဆိုပါများမှာ MSLED 10 XB2, MSLED 20 XB2 နှင့် MSLED 40 XB2.
"တူရိယာကျွန်ုပ်တို့၏ MSLED စီးရီး panel ကိုအလင်းအိမ်သို့မဟုတ်ဝေးလံသောဖော့စဖရပ်မီးလုံးအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ dual-မှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူးတစ်မူထူးခြားတဲ့စနစ်, ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ dual-မှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူးပစ်၏ပဒေသာနှင့်အတူအလင်း၏ပျော့ပျောင်းကြော့လက်ဆေးပေါင်းစပ်, "Glen ဟန်, PrimeTime သမ္မတကပြောပါတယ်။
ဆန်းသစ်နှင့် superbly အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာအလင်းရောင်များအတွက်မသိ, PrimeTime Lighting စနစ်များ, Inc ထိပ်တန်းအရည်အသွေး, စီးပွားဖြစ်-တန်းနဲ့ LED နှင့်ချောင်းအလင်းရောင်လ်တာရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်, ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနဲ့ audio-အမြင်အာရုံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထုတ်လုပ်တယ်။ PrimeTime ရဲ့အမေရိကန်ထုတ်ကုန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အချို့သောနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးသတင်းအစုံ, ဗီဒီယိုကွန်ဖရအဆောက်အဦးများ, ကိုးကှယျခွငျးသည်များ, ဘာသာရေးအသံလွှင့်စတူဒီယို, ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို, တက္ကသိုလ်အားကစားစတူဒီယို, မြို့ကောင်စီအခန်းများနှင့်အကွာအဝေးသင်ယူမှုစာသင်ခန်းအလင်းလုပ်ကြံ။ PrimeTime luminaires ကြာရှည်ခံမှုနှင့်အရည်အသွေးတည်တံ့မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် 25 နှစျကျြောကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်စတူဒီယို chief Engineer အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူး နည်းပညာဒါရိုက်တာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အယ်လ်အီးဒီ LED Lighting အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာ အလင်းရောင်ဒါရိုက်တာ လှံ & Arrows စတူဒီယို Lighting တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-03-06
ယခင်: NAB 2019 မှာ Lynx Technik စျေး HDR Evie ™ - ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး Automated "Frame က-by-Frame က" HDR ကို SDR ကူးပြောင်းခြင်းဖြေရှင်းချက်မှ
နောက်တစ်ခု: GatesAir အလက်ဇန္ဒား Kurz ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းနှင့်အတူ EMEA အရောင်းတပ်ဖွဲ့တိုးချဲ့